बलिउड क्षुद्र र छोटा मानिसहरूले... :: एजेन्सी :: Setopati
एजेन्सी मुम्बई, माघ २२
'मणिकर्णिका'को सफलतासँगै बलिउडकी बोल्ड अभिनेत्री कंगनाले निर्देशकिय डेब्यूमै सफल सिनेमा दिने निर्देशकको परिचय थपेकी छन्। सिनेमाको सफलताले वक्सअफिसकी रानी भनेर पाएको पदवी पुन: आफ्नो शिरमा ल्याएकी छन्।
'मणिकर्णिका'को सफलता पाइरहँदा तपाईलाई फेरि बलिउडकी रानी भनिन थालिएको छ। यस्तो सुन्दा तपाईलाई के हुन्छ?
म यो गर्न सकेकोमा आफूलाई धन्य सम्झन्छु। यो प्रोजेक्टमा ठूलै खतरा मोलेकी थिएँ। जब यो सिनेमा अलपत्र पर्‍यो र मैले मेरो हातमा लिए तब धेरैलाई लागेको थियो, 'अब यो सिद्धिइ।' प्रोजेक्ट असफल भए यसको सारा दोष मलाई जानेछ भनेर सबैले भनेका थिए। मैले यदि त्यस्तो हुन्छ भने होस् भनेर सोचें। के हुन्छ? मलाई हेर्नु थियो। यो खतरापूर्ण नै थियो तर मैले आफ्नो हातमा लिएँ।
मेरो सोचाइमा व्यवसायिक जीवन मसिनो डोरीमा हिँडेजस्तो हो। तपाईंलाई मानिसहरूले हेरिरहेका हुन्छन्। पछिल्लो केहि वर्ष मेरा लागि अति नै चुनौतीपुर्ण रह्‍यो। यो अवधिमा मेरा केहि सिनेमाले काम गरेनन् भने 'मणिकर्णिका'को सिनेमा अधिकारलाई लिएर विवाद, मुद्धामामिला पनि भए र केहि व्यक्तिगत विवाद पनि। त्यतिबेला मैले आफूलाई पेलिएको, एक्लाइएको अनुभव गरें।
सुटिङको बेलामा म दुर्घटनामा परे। टाउकोमा १८ वटा टाँका लगाउनुपरेको थियो। ठीक त्यही बेला केहि बजारू मानिसहरू मलाई मिडियामा आक्रमण गरिरहेका थिए। म यसरी काम गरेको मान्छे थिइन। आज म अभिनेत्री-निर्देशक छु जसका कारण मानिसहरूको अझ बढि विश्वास छ तर हिजो 'यो कंगना के हो र?' भन्ने थियो।
'मणिकर्णिका'को सफलताले तपाईंलाई सिने उद्योग र दर्शकहरूका बारेमा के सिकायो?
सिने उद्योगका मानिसहरूले सिनेमालाई लिएर हार्दिक छैनन् र यस विरूद्ध मोर्चाबन्दी गरिरहेका छन्। उनीहरूले केहि बोलीरहेका छैन् र उपेक्षा गरिरहेका छन्। यो मोर्चाबन्दी यति बलियो छ कि साना भन्दा साना कलाकारले मलाई गोप्यरूप सन्देशहरू पठाइरहेका छन्। तपाईंलाई थाहा छ उनीहरू सामाजिक संजालमा यसबारेमा लेख्न वा बोल्न हिम्मत गरिरहेका छैनन्। यसरी उनीहरूको मोर्चाबन्दी छ। यो होइनकी यसले मलाई चोट दिएको छैन्। यो 'मेन्टल है क्या वा पङ्गा' बन्नेछ। यी सिनेमालाई म देशका लागि गरेको भन्दन्। यी यस्ता सिनेमा हुन जो तपाई गरिरहनुहुन्छ र प्रत्येक साता आइरहन्छन्। हामी 'क्वीन', दंगल' वा समाजलाई प्रभाव पार्ने सिनेमाका लागि साथै उभिन्छौं। सबैजना 'मणिकर्णिका'को लागि पनि उभिनुपर्छ तर लाजमर्दो के भयो भने यसलाई लिएर उनीहरूका खिच्चोपना आइरहेको छ। मलाई वास्तवमा के लाग्छ भने सिनेउद्योग सस्ता र छोटा मानिसहरूले भरिएको छ जो राम्रो वा नराम्रो भन्दा माथि उठ्न सक्दैनन्।
म सबै कुरा खुला रूपमा भन्छु। हामी क्रिसलाई डिसेम्बरमा सिनेमा देखाउन चाहन्थ्यौं तर उनी कहिल्यै आएनन्। खासमा भन्नुपर्दा उनी सिनेमा पूरै खत्तम भएकोमा पूर्ण विश्वस्त थिए। उनी यसलाई रिभाइभ गर्न सकिदैन सोच्थे। तर जब मैले गरें तबमात्र उनी 'मेरो सिनेमा, मेरो सिनेमा' भन्न थाले। यो ठीकै पनि छ किनकी निर्देशकको जस उनले पनि पाएका छन्। तर मेरो प्रश्न के भने मिडियामा हल्ला किन्, मिडियामा बहस किन? किन मलाई भेट्दैनन र आफ्नो कुरा राख्दैनन्। उनले मलाई कहिले पनि भेटेनन्, आफ्नो कुरा कहिले पनि राखेनन्, मैले बोलाउँदा चासो दिएनन्। सिनेमा हेर्न उनलाई बोलाएकै हो। तर उनले कुनै प्रतिक्रिया नै जनाएनन्।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, माघ २२, २०७५, ०४:००:००
यस कुराले दुःखी छन् अक्षय
शिल्पाले अस्वीकार गरिन् १० करोडको अफर
'कुछ कुछ होता हैं'को रिमेकमा यी कलाकारलाई खेलाउन चाहन्छन् करण
रिलिज अगावै 'साहो'ले कमायो ३२० करोड
संघर्षको दिन सम्झेर भावुक बने जोन- मान्छेहरू लायक छैन भन्थे
'लाल कप्तान'को टिजरमा हेर्नुस् सैफको खतरान नागा लुक्स